कृत्रिम खुट्टा हाल्न झापादेखि भैरहवा पुगे रिकबहादुर - विवेचना
कृत्रिम खुट्टा हाल्न झापादेखि भैरहवा पुगे रिकबहादुर
September 16, 2018 359 Views
झापा, भदौ ३१ । बुद्धशान्ति गाउँपालिका ५ झापाका ६० वर्षीय रिकबहादुर कुमालको बायाँ खुट्टाको औँलामा अचानक घाउको सानो फोको देखियो । उनले वास्ता गरेनन् । तीव्र रुपमा आकार बढ्दै गएपछि भने नजिकको क्लिनिकमा गएर देखाए । तर पनि घाउको फोको बढ्ने क्रम रोकिएन ।
पछि चिकित्सकले पत्ता लगाए- उनलाई खुट्टामा क्यान्सर भएको रहेछ । यो सुन्नासाथ उनी छाँगामाथिबाट खसेझ भए । परिवार झस्किए । आफो कमाइले परिवारको जीवनकोपार्जन गर्दै आएका उनी एकाएक चिन्तामा डुब्न थाले ।
८ वर्षअघि रिकबहादुरलाई घाउ देखापरेको थियो । लामो समय लगाएर उनले उपचार गरे । देशका विभिन्न अस्पतालमा भौतारिए । आफूले जोरजम्मा गरेको सबै रकम उपचार खर्चमै लगाए । ‘त्यत्तिले मात्रै पुगेन, गरीखाने थोरै खेतबारीसमेत बन्धकी राख्नुपर्यो’, उनी भावुक बन्दै भन्छन्, ’तर, पनि घाउ निको भएन क्यान्सर अझै फैलिने भएपछि डाक्टरले खुट्टा काटेर फालिदिए ।’
उनले खुट्टा नै गुमाएपछि श्रीमती, दुई छोरी र एक छोराका लागि जीविकोपार्जन जटिल बन्दै गयो । किनकि उनी बैशाखीको सहारा लिने भइसकेका थिए । रिकबहादुर अशक्त भएपछि कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी छोरी र कक्षा १० पास गरेका छोराले बीचमै पढाइ छाड्नुर्पयो ।
‘बुवाको उपचार गर्दा भएको पैसा सकियो । जग्गाजमिन बन्धकी राखेर खर्च जुटाउनुर्पयो’, छोरी समिरा भन्छिन्, ’विद्यालयमा फि तिर्ने पैसा समेत नभएपछि बाध्यतापूर्वक बीचमै पढाइ छाडेर घर खर्च चलाउने जोहोमा लाग्यौँ ।’
एक वर्ष अघिसम्म त रिकबहादुरकी पत्नीले घरव्यवहार धानिरहेकी थिइन् । उनको निधन भएपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी छोराछोरीमा आइलागेको छ । ‘आमा बितेपछि कलिलै उमेरको भाइलाई ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीको लागि चार महिनाअघि खाडी मुलुक पठाउन बाध्य भयौँ’, समिरा भन्छिन् ।
समिराकी बहिनी कक्षा ६ मा पढ्छिन् । उनका लागि पनि खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता समिरालाई छ । अहिले उनी बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगीको काम गर्छिन् ।
गाउँपालिकामा कामकै सिलसिलमा फेसबुक चलाउँदै थिइन् समिरा । एउटा पोस्ट देखिन्, मारवाडी सेवा समितिको । जहाँ कृत्रिम खुट्टाको उपचार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको थियो । पहिलोपटक कृत्रिम खुट्टाको उपचारबारे देखेको सूचनामा उनी विश्वस्त हुन सकिनन् । त्यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि राखिएको थियो । उनले उक्त नम्बरमा फोन गरिन् । ’राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि ढुक्क भएँ’, भैरहवामा पुगेकी उनले सुनाइन्, ’बुवालाई अब त्यहीँ लगेर कृत्रिम खुट्टा हाल्ने योजना बनाएको थिएँ । पूरा होला भन्ने आशा छ ।’ विगतका आठ वर्ष निकै कष्टकर रहे पनि अबका दिन सहज हुनेमा उनी विश्वस्त छिन् ।
मारवाडी सेवा समिति काठमाडौँको सहयोगमा मारवाडी युवा मञ्च भैरहवा र मारवाडी युवा मञ्च बुटवलले आयोजना गरेको कृत्रिम खुट्टा नि:शुल्क वितरण शिविरमा पुगेका कुमालले आफो खुट्टाको नाप दिएर फर्किएका छन् ।
खुट्टाको नाप दिँदै रिकबहादुरले आफूले अब नयाँ जीवन पाउने अनुभूति भइरहेको भन्दै समिति आफा लागि देउतासरह रहेको बताए । पैसाको जोहो गरेर भैरहवा आएका उनलाई आवतजवातको खर्च ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शिविरका संयोजक अरुण अग्रवालले प्रदान गरेका छन् । रिकबहादुरको नापअनुसार कृत्रिम खुट्टा एक महिनाभित्र तयार हुने र उनी सहज रुपमा विगत जस्तो जीवन बिताउन सक्ने मारवाडी युवा मञ्च भैरहवाका अध्यक्ष मनोज अग्रवाल बताउँछन् ।
कृत्रिम खुट्टा लगाउन कुमाल परिवारलाई भैरहवा जाने पैसाको समेत समस्या पर्ने भएकाले आफूहरुले उनका लागि कृत्रिम खुट्टा घरमै र्पुयाइदिने अग्रवालले बताए । बनेपा, हटौँडा, गुल्मी, झापा, नेपालगन्ज, जुम्ला, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाबाट आएका ६२ जनाको कृत्रिम खुट्टा बनाउने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ ।
Previous What exactly Mail Order Brides Solutions and how to use them?
Next बिर्तामोडमा भित्रियो एसयुभी टोयोटा रस
Pingback: สินเชื่อ จำนำ ที่ดิน
August 16, 2017 206,491
Celia: Highly descriptive article, I loved that bit. Will there beapart 2?...
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]alwaysabig fan of linking to bloggers that I love but dont get a...
هزینه دیاگ خودرو: خودرو Do you haveaspam dilemma on this blog I al...
mp3 download: mp3 download [...]we came acrossacool web page that you may well appreciate. T...